Sary nindramina BBC
Samy nanao fianianana izy roa lahy ny 4 desambra 2010, samy nilaza fa nandresy.
Alassane Ouattara notohanan'ny Firaisam-be iraisam-pirenena, Laurent Gbagbo notohanan'ny Conseil Constitutionnel, ary tsy nety hiala teo amin'ny fitondrana.
Raikitra ny sakoroka, 3000 no maty, ary notafihana tao anaty lapa i Laurent Gbago ny avril 2011, tafika nalefan'i Alassane Outtara, izay notohanan'ny Frantsay sy ny Firenena mikambana.
Voasambotra i Laurent Gbagbo sy ny vadiny ary ireo niara-dia taminy.
Ny 6 mey 2011 dia nambaran'ny Conseil Constitutionnel indray fa lany i Alassane Outtara, ary dia namerina fianianana indray izy ny 21 mey 2011.
Maro ireo Filoham-pirenena nanatrika ny fianianana nataon'i Alassane Ouattara, anisan'izany ny Filoha frantsay tamin'izany Nicolas Sarkozy.
Laurent Gbagbo nalefa tany La Haie, ny vadiny kosa notanana tao Côte d'Ivoire ary vao aingana no navotsotra, dia izao, 7 taona aty aoriana no navotsotry ny Fitsarana iraisam-pirenena izao. Mbola andrasana raha hanao fampakarana ny Fampanoavana.